ထောင်ထဲမှာအသက်တာကိုလွယ်ကူလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, ဟောင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူဟုပြော - လူတွေ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် ကလူ - "ထောင်ထဲမှာဘဝကလွယ်ကူလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, ဟောင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူဟုပြော
ကလူ - ထောင်ထဲမှာဘဝလွယ်ကူလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, ဟောင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူဟုပြော
Holly Coulman Victorville အတွက်အနည်းဆုံးလုံခြုံရေးအကျဉ်းထောင်မှထွက်သွားဘယ်မှာ 2015 ၏နံနက်ကယ်လီဖိုးနီးယား၏မြင့်သဲကန္တာရထဲတွင်သူမ၏မှာတဦးတည်းနောက်ဆုံးကြည့် ယူ. သူမတစ်ဦးကောင်းနံနက်စာယူသေချာလုပ် - လာသောအခါသူမလိုသူမမသိခဲ့ပါ။ အကြောင်းမူကား,
မိမိအဆိုက်ရောက်ပြီးနောက်တစ်ကော်ပိုရိတ်ခရက်ဒစ်ကဒ်၏အသုံးပြုမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိမ်လည်မှုပြစ်မှုထင်ရှား Hewlett-Packard ရဲ့လက်ထောက်၏ယခင်အလုပ်အမှုဆောင်သည်, ဧည့်ခံခန်းမအပြင်ဘက်နှုတ်ဆက်သူမ၏ခင်ပွန်းကိုနမ်း။ သူမသည်ထို့နောက်ဖက်ဒရယ်အကျဉ်းသားအဖြစ်အသက်တာ၏တံခါးခုံကိုဖြတ်ကျော်: သူမ, စက္ကူတစ်ဦးညိုအပိုင်းအစအပေါ်မှာရပ်လျက်မိမိအဝတ်ကိုဝတ်, သူမ၏ဘရာစီယာနှင့် panties နှင့်ကုန်ခိုးသွင်းခိုးထုတ်ခြင်းတစ်ရှာဖွေရေးအကြောင်းမဲ့။ ယခုစွပ်စွဲက Wall Street ထောင်မှအတိုင်ပင်ခံအကြံပေးသူကို Coulman, ကဖက်ဒရယ်ထောင်ထဲမှာကျင်းပပြုလုပ်ခံရမယ်လို့အဆိုးဆုံးအမျက်မဖြစ်မယ်လို့သူကပြောပါတယ်။
မင်းသမီးရီ Loughlin Mossimo Giannulli နှင့်သူမ၏ခင်ပွန်းတစ်ဦး Pre-ရုံးတင်စစ်ဆေးကြားနာခြင်း, 27 သြဂုတ်လအပြီးဘော်စတွန်ရုံးထားခဲ့ပါ။ (ယောသပ်သည် Prezioso / AFP / Getty Images)
သောကြာနေ့တွင်, မင်းသမီး Felicity Huffman ကသူ့ကံကြမ္မာကိုလည်းအကျဉ်းထောင်၏အမေရိကန်ဗျူရို၏ထိန်းသိမ်းရေးစင်တာအတွက် Self-လက်နက်ချကပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းရှိမရှိမေးလျှောက်။ ကောလိပ်များအတွက်အရှုပ်တော်ပုံဝင်ခွင့်များအတွက်အပြစ်ရှိကြောင်းတဲ့သူက Eleven ကအခြားချမ်းသာတဲ့မိဘတွေကလာမယ့်နှစ်လမှာသူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်။
Huffman နှင့်ဤမိဘများအတွက် Coulman နှင့်အခြားဟောင်းတဦးအကျဉ်းသားသကြားအင်္ကျီကဖို့လမ်းမရှိကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးကြပါတယ်။ ဘားနောက်ကွယ်မှကဲ့သို့ဖြစ်၏။
"ဒါဟာစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောခဲ့သည်" ဟုအဆိုပါဂုရုလူနေမှုပုံစံစတဲ့, မာသ Stewart ကဆိုပါတယ် 2017 အတွက်အင်တာဗျူးတွင် ။ "အဘယ်အရာကိုမျှဘာမှကောင်းလှ၏။ "
Huffman တူသောအဖြူရောင်ကော်လာအတွက်တရားခံမှ, မိဘများ Bay Area အရှုပ်တော်ပုံစွပ်စွဲနဲ့ "အပြည့်အဝအိမ်," ရီ Loughlin ၏ယခင်ကြယ်ပွင့် - အပြစ်ရှိမဟုတ်တောင်းပန်များနှင့်ငြင်းပယ်သောသူ - ထောင်ကိုသွား၎င်းတို့၏မိသားစုများနောက်ကွယ်မှထွက်ခွာဆိုလိုပေသည် နှင့်ကျယ်ဝန်းအိမ်တော်နှင့်သူတို့ "ရက်စက်စွာ" အစားအစာများကိုစား, ရေအလွန်ထူထပ်နှင့်ဆူညံဆောင်တွင်နေထိုင်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုရိုက်ထည့်မှန်မှန်စောင့်နေဖြင့်ဒီစာအုပ်ကိုအထင်သေးခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏အချိန်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာကာသကျော်မျှထိန်းချုပ်မှုရှိနေကြသည်။  ဒီအဖြစ်မှန်အားကြောင့် Huffman အစိုးရရှေ့နေများအားဖြင့်အကြံပြုတစ်လ၏ဝါကျဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ကြောင်းအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါတာဝန်ရှိစမ်းတစ်ဦးအမြင်အပေါ်အခြေခံသည်သူ၏ရှေ့နေများ, ဘယ်သူမှဘဏ္ဍာရေးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရက်စက်မှုကြောင့်စမ်း, အသိုင်းအဝိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့် $ 20 000 တစ်ဒဏ်ငွေမှအကျိုးသင့်တယ်လို့ပြော ။ သို့သော်အမေရိကန်ရှေ့နေချုပ်ရဲ့ရုံးကပင်ငွေရတတ်သောသူနှင့်အစွမ်းထက်ပညတ္တိကျမ်းထက်မသာဖြစ်ကြောင်းပြသနိုင်ဖို့လိုအပ်သညျကား, တစ်ဦးအသနားခံသဘောတူညီချက်သို့ ဝင်. ကြသူမိဘများအတွက်ထောင်ချတဲ့ကာလမေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်။
သူတို့ကအစကပတေရုဖို့တစ်လတစ်အသုံးအနှုန်းချင်တယ်။ ဇန်နဝါရီလ Sartorio, Menlo Park, လေးလ Majorie Klapper, Menlo Park များအတွက်ထောင်ဒဏ်; နှင့် 15 လအတွင်း '' ထောင်ကျနေတဲ့ဝါကျဆန်ဖရန်စစ္စကိုသွ Huneeus ဂျူနီယာသည်, Napa Valley ကနေစပျစ်ရည်ကိုအပေါ်သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
ဆန်ဖရန်စစ္စကို Agustin Huneeus ဂျူနီယာ, တက္ကသိုလ်များသို့တက်ရောက်ရန်၏အရှုပ်တော်ပုံနှင့်ဆက်စပ်သောကြားနာဘို့မတ်လ 29 အပေါ်ဘော်စတွန်တရားရုံးထံသို့သွားလေ၏။ ။ (မကျောက်ခေတ် / ဘော်စတွန်သံတော်ဆင့်)
အစိုးရရှေ့နေများအဆိုအရ Huffman, Sartorio, Klapper, Huneeus နှင့်ရာဇဝတ်မှုအစီအစဉ်များအတွက်စေ့စပ်သည်အခြားတရားခံ "ဖွံ့ဖြိုးပြီး" နှင့်အကောင်းဆုံးကိုကောလိပ်များအတွက်အကျင့်ပျက်သူတို့သားသမီးရန် "အရှက်မရှိသော" "ဥစ္စာဓနပေါ်ကနေဆောက်ထားတဲ့စဉ်အခွင့်ထူး နှင့်အချို့ကိစ္စများတွင်အနုပညာရှင်။ သူတို့ရဲ့သားတို့သည်မိမိတို့ SAT နှင့် ACT ရမှတ်များတိုးတက်တွေ့မြင်သို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်အောင်လာဘ်အတွက်သောင်းချီသို့မဟုတ်ရာနှင့်ချီသောဒေါ်လာငွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏၏လောင်း "ကိုပိုမိုထိုက်တန်" ဒီမိဘများကအခြားကောလိပ်အတွက်မှာပါတဲ့ရာထူးယူကြပြီ " လိမ်လည်လှည် designated ။ အားကစားတပ်သားသစ်အဖြစ်။
"အခွင့်ထူးတစ်ခုအသိနှင့်အတူစည်းစိမ်နှင့််ပေါ်အခြေခံပြီးဒုစရိုက်သည်, ထောင်ချခြင်းတစ်ခုတည်းသော Level ဖြစ်ပါတယ်" ဟုအစိုးရရှေ့နေများကသူတို့စီရင်ချက်ချစာချွန်လွှာပြောကြားခဲ့သည်။ "အကျဉ်းထောင်၌, လူတိုင်း, တူညီတဲ့လမ်းကုသတူညီသောလမ်းကိုဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင်သည်၎င်း၏ချမ်းသာကြွယ်, အနေအထားသို့မဟုတ်ကျော်ကြားမှု၏ရောစပ်။ "
Stewart ကသူမအဘယ်သူမျှမဖက်ဒရယ်အကျဉ်းထောင်အတွင်းရှိသုံးစွဲအချိန်၏ "အမျက်" သည်းခံရ၏ရန်ရှိသည်သင့်ကြောင်းထင် Podcast တခုကို 2017 အတွက်ကေတီ Couric ပြောသည် - "။ လူသတ်သမားများနှင့်အချို့သောအခြားအမျိုးအစားများ မှလွဲ. "
2004 ခုနှစ်, လူနေမှုပုံစံစတဲ့၏ဂုရု Alderson အနောက်ဗာဂျီးနီးယားမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးအကျဉ်းထောင်အတွင်းရှိငါးလနေခဲ့ရသည်။ နှင့်စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်အကြောင်းကိုဖက်ဒရယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့လဲလျောင်း၏ပြစ်မှုထင်ရှားခံရပြီးနောက် 2005 ။ သူမသည်အခြားအင်တာဗျူးတွင်ပြောကြားခဲ့သည် Oprah Winfrey ထိန်းချုပ်မှုများဆုံးရှုံးမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများအတွက်အထူးသဖြင့်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။
"သူတို့ကအမိန့်၏လောကဓာတ်မှလာကြ၏။ သူတို့အောက်မှာလူတွေရှိသည်နှင့်သူတို့ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာသူတို့အပြောပါ။ သင်တစ်ဦးဖက်ဒရယ်အကျဉ်းထောင်ဝင်သောအခါ, သင်သည်မည်သည့်ထိန်းချုပ်မှုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, "မိုက်ကယ် Frantz သူဒါရိုက်တာအဖြစ်အလုပ်လုပ်တယ်အဖြူကော်လာတရားခံတွေအကြောင်းကပြောပါတယ် ထောင်ထဲမှာအချိန် Consulting ။ သူကအခွန်ရှောင်မှုကိုများအတွက်ဖက်ဒရယ်ထောင်ထဲမှာ 36 လလောက်နှင့်ဖောက်သည်အမေရိကန်ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားစီရင်ရေးစနစ် navigate နှင့်ဘားနောက်ကွယ်မှအသက်အဘို့ပြင်ဆင်ထားရန်ကိုကူညီငှားရမ်းထားအနည်းငယ်အတိုင်ပင်ခံတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
မိမိအအရောင်းရဆုံးစာအုပ်အဖြစ်စာအုပ်ထဲတွင် "လိမ္မော်ရောင်သစ်က Black ဖြစ်ပါတယ်" ဟုစာရေးသူ Piper ကာမန် wrote: "ရှိပါတယ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုတစ်မူးဝြေခင်းခင်းကျင်းဖြစ်ပါသည်အချိန်ဇယားနှင့်တာဝန်ရှိသူတဦးနှင့်တရားမဝင် rituals ။ လျင်မြန်စွာသူတို့ကိုလေ့လာပါသို့မဟုတ်အကျိုးဆက်များခံရ, လူမိုက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားကြောင်းလိုပဲလူထုံကုသရမည်, အခြားအကျဉ်းသားများမကောင်းတဲ့ဘေးထွက်ဖြစ်လာတစ်ကိုယ်ရံတော်မကောင်းတဲ့ဘေးထွက်ဖြစ်လာ, သင့်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်၏မကောင်းတဲ့ဘေးထွက်ဖြစ်လာ, အိမ်သာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အတင်းအကျပ်ခံရ, အရာအားလုံးစားသုံးနိုင်သောအခါ, သင့်ဖိုင်ထဲမှာ "ပစ်ခတ်မှု" သို့မဟုတ်အဖြစ်အပျက်၏အစီရင်ခံစာအရအထူးအိမ်ယာယူနစ်ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာပို့အွန်လိုင်းအမြဲစားကြလော့။ "
နိမ့်ဆုံးလုံခြုံရေးထောင်ထဲမှာ - Huffman များအတွက်အများဆုံးဖွယ်ရှိ destination သည်နှင့်အခြားအလယျပိုငျး-အသက်မိဘများ "စစ်ဆင်ရေး Varsity ချယ်လ်ဆီးအသင်း" သိမ်းယူ - အကြမ်းဖက်မှုနှင့်အကျဉ်းထောင်ဂိုဏ်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အစီရင်ခံစာထဲမှာရေးထားပါတယ် လေးနက်သော။
သို့သျောလညျး Huffman နှင့်အခြားမိဘများချို့တဲ့နောက်ခံမူးယစ်ဆေးဝါးပြစ်မှုများများအတွက်ရှည်စာကြောင်း်ထမ်းဆောင်မှအခြားအထိန်းသိမ်းခံရသူတို့၏စည်းစိမ်ဥစ္စာပြန်လာနိုင်မမျှော်လင့်ထားသင့်ပါတယ်, လာရီ Levine, တည်ထောင်သူကပြောပါတယ် Wall Street ကအကျဉ်းထောင်၏အတိုင်ပင်ခံ .
ထို့အပြင်ဤအကျဉ်းသားအထူးမျက်နှာသာရဖို့မိတ်ဖွဲ့ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်, အီး Levin ဟုပြောသည်။ သူသည်ရိုသေလေးစားမှုကိုပြသ Huffman နှင့်အခြားမိဘများအကြံပေးမယ်လို့အထူးကုသမှုမမျှော်လင့်ပါဘူးနှင့်၎င်းတို့၏အမှုနှင့် ပတ်သက်. တိုင်ကြားဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ထို့အပြင်သူသည်သူတို့ကိုပြောပြသည်: "ပွင့်လင်းသင့်ရဲ့နားရွက်ကိုသိမ်းဆည်းထားပါပါးစပ်ပိတ်ထားခြင်းနှင့်ကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်ဆိုးကိုရှောင်ကြဉ်။ "
ကာမန်နှင့် Coulman နှောင့်အယှက်သို့မဟုတ်စော်ကားအစောင့်လိင်ထိန်းသိမ်းခံကြောင်းပြောပြပါ။ Coulman သူမကသူတို့၏အခွင့်ထူးဆုံးရှုံးကြောက်ရွံ့သောကြောင့်သူနှောင့်ယှက်စောင့်ကြံ့ကြံ့ခံဆိုပါတယ် - သို့မဟုတ်ပိုဆိုး - သူမကစောဒကတက်လျှင်, သူမလူသိရှင်ကြားအမျိုးသမီးတွေပါဝင်သောလုံခြုံရေးကိစ္စကိုကြေငြာပြီးနောက်တွင်တိုက်ပိတ်ခံရအတွက်သုံးစွဲ 60 ရက်။
Levine နှင့် Frantz စောင့်ပြည်နယ်အကျဉ်းထောင်၌မိမိတို့ counterparts တွေကိုနှိုင်းယှဉ်နည်းနည်းလေ့ကျင့်ရေးခဲ့နှင့်ဤပြစ်ဒဏ်ခတ်အတွေ့အကြုံကိုစေရန်မိမိတို့၏အကောင်းဆုံးလုပ်နေခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်။
"ဒီအစောင့်ကိုမုန်း, သူတို့ကသူတို့အလုပ်သူတို့မုန်း, သူတို့ကအကျဉ်းသားတွေကိုဦးတည်ခါးသီးလည်ချောင်းနာနေကြတယ်" ဟုရက်ကက်၏ပြစ်မှုထင်ရှားခံရပြီးနောက်နိုင်ငံအတွင်းရှိအကျဉ်းထောင်အတွင်းရှိ 10 နှစ်ကြာခဲ့သူ Levine, အာမခံလိမ်လည်မှုဟု မူးယစ်ဆေးဝါးကုန်ကူး။
ဘားနောက်ကွယ်မှအသက်အဘို့အဘိတ်စီရင်ချက်ချမတိုင်မီလအတွင်းစတင်သင့်ကြောင်းအရှုပ်တော်ပုံအတွက်တရားစွဲဆိုမိဘအချို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်, Frantz နှင့် Levine ကဆိုသည်။ ခံယူချက်နှင့်အတူရှေ့နေများမိဘများဒေသများ Huffman နှင့်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ဧရိယာ, လာစတငျရ, သူတို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏အမူအကျင့်အပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်တောင်းဆိုမှုများကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူး။
မာသ Stewart ကဧပြီလ 23 အပေါ်နယူးယောက်ရှိတစ်ဦး Gala မှာရောက်ရှိလာသည်။ အသက်တာ၏ဂုရုဖက်ဒရယ်အကျဉ်းထောင်များနှင့် 2004 2005 အတွက်ငါးလနေခဲ့ရသည်။ (Angela Weiss / AFP / Getty Images)
စွပ်စွဲခံရသူအပြစ်ရှိကြောင်းပြီးတာနဲ့သူတို့က, တတ်နိုင်သမျှအိမ်သို့အဖြစ်အနီးကပ်လုံခြုံအကျဉ်းထောင်အတွင်းရှိနိုင်ရန်အတွက်၎င်းတို့၏ရေးရာထားအရေးပါသောဒဏ်ရာခံယူဖို့အချိန်ဇယားကိုအချိန်ရရန်ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ဒဏျမတိုင်မီစမ်းအရာရှိများနှင့်အတူတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း, Frantz နှင့် Levine ပြောပါ
ကြေညာချက်မှာတော့အကျဉ်းထောင်၏ဗျူရိုသူက "စစ်ဆင်ရေး Varsity ချယ်လ်ဆီးအသင်း" ၏မိဘများ၏တဦးတည်းကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဘယ်မှာအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်နိုင်ဘူးဟုပြောသည်။ ရုံး မူဝါဒရှိပါတယ် နေအိမ်ထဲကနေ 500 ကီလိုမီတာအတွင်းအကျဉ်းသားကိုအကျိုးသက်ရောက်ရန်ကြိုးစားပေမယ့်ရှိပါတယ်လျှင်အမြဲဖြစ်ပျက်ပါဘူး "တိကျတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်ဘေးကင်းလုံခြုံမှု, programming ကိုသို့မဟုတ်လူဦးရေ။ "
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, မိသားစုသမိုင်း, အလုပ်အတွေ့အကြုံ, စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်စွပ်စွဲခံရသူ၏ရာဇဝတ်မှုသမိုင်းတွင်ဆန်းစစ်, တရားသူကြီးတစ်ဦးမှတစ်ဦးဝါကျအကြံပြုဖို့စမ်းအရာရှိများကအသုံးပြုသည်။ ဒါဟာအစထောင်ထဲမှာအာဏာပိုင်များအကျဉ်းသားလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုသည့်မော်ဒယ်၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုကိုလျော့ကျစေနိုင်တယ်ဖန်တီး, Frantz ကဆိုသည်။
သူလည်းသူက client များကြိုတင်မဲအတွက်အသေးစားထင်ရပေမယ့်အသက်တာ၏အရည်အသွေးပေါ်တစ်ဦးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါမှာ "အကြိုးကြေးဇူးမြား" တောင်းဆိုရန်ကူညီပေးနေခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ဤရွေ့ကားဉျြးကဉျြးကုတင်, စောင်နှင့်ခေါင်းအုံးနှင့်အတူတာဝန်ကျအဖြစ်ချစ်ရသူ၏နောက်ထပ်လည်ပတ်မှုပါဝင်နိုင်ပါသည်။
အိပ်စက်ခြင်းများအတွက်အလုပ်ဘွတ်ဖိနပ်, သန့်စင်ခန်းသုံး, Benadryl နှင့်: Coulman သူအစောဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ကော်မရှင်နာမှာပစ္စည်းဝယ်ဖို့နိုင်အောင်ခရီးသွားလာမတိုင်မီ $ 360 သည်သူ၏ထောင်ထဲမှာအကောင့်ကိုဖွင့်ဖို့ကိုပြောသည်ဟုဆိုသည် အချိန်ပေါ်စေမယ့်လက်ပတ်နာရီတစ်လုံး။ Coulman သည်အခြားအကျဉ်းသားသူမ၏ရှပ်အင်္ကျီနှင့်သူမ၏အတွင်းခံအဝတ်အစားမှဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်ခံနိုင်သော၎င်း၏ပထမဆုံးနေ့ကရှိပြီးသားတဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်, ဆီ, earplugs, ဘောင်းဘီရွရွပြေးခြင်းနှင့်တစ်ဦး Hershey bar ကိုအသုံးပြုသောလုပ်သောရှင်းပြသည်။
"ဒီ Groundhog Day ကို"
Levine က "Groundhog Day ကို" အဖြစ်အကျဉ်းသားများနေ့စဉ်ဘဝကိုဖော်ပြထားတယ်: နံနက်စာစားရန်6နာရီမှာမြင့်တက်, ထို့နောက်အလုပ်လုပ်နေ့လယ်စာ, အလုပ်, ညစာနှင့် 21h30 သို့မဟုတ် 22h00 Stewart ကမှပယ်ကြမ်းပြင်သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်သန့်ရှင်း ရုံးများ, တခြားအကျဉ်းသားမီးဖိုချောင်ထဲမှာအလုပ်ရှာဖွေ Levine သူတစ်ဦးစားပွဲပေါ်မှာအလုပ်ခဲ့ဟုဆိုသည်။ Levine ပင်အများဆုံး menial အလုပ်ကသူ့အလုပ်အဓိပ်ပာယျပေးကထပ်ပြောသည်။
ကွန်ပျူတာအစည်းအဝေးများနှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းများသို့အလည်အပတ်သွားရောက်ခဲ့သည် - Frantz အဆိုအရအကျဉ်းထောင်မဟုတ်ရင်နာကျင်စွာပျင်းစရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်, အကော်မရှင်နာမှလာရောက်လည်ပတ်သူအားဖြင့်အချိန်ပျင်းလည်းကျိုးအချိန်ကုန်, တယ်လီဖုန်းစေရန်လိုင်းအတွက် 15 မိနစ် 30 တောင်းဆိုထားသည်။ , လေ့ကျင့်ခန်းလက်မှုပညာမပညတ္တိကျမ်းစာကြည့်တိုက်၌မဘတ်သို့မဟုတ်အခြားအကျဉ်းသားကူညီပေးဖို့ဟာသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုအသုံးပြုဖို့: Levine ဖောက်သည်အကျိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုသူတို့ရဲ့အခမဲ့အချိန်ကိုအသုံးပြုရန်ဟုဆိုသည်။
မိမိအစံချိန်လက်ထောက်ဦးတည်ချက်အဖြစ်ကိုတဖန်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာမှသူ့ကိုတားဆီးမယ်လို့ သိ. Coulman တစ်ရှေ့နေအကူဖြစ်လေ့လာယခု Dallas ရှိပြည်သူ့ Defender ၏ရုံးခန်းထဲမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သူမသည် "သင်သည်အဘယ်သို့ကြုံနေရနေကြသည်ကြောက်စရာကြောင်းကိုနားလည်ပါသော်လည်း, သင်သည်ဤအပိုငျးဖြည့်စွက်တစ်ချိန်ကသင်သည်သင်၏အသက်တာ၏ကျန်မှုအတွက်အရေးယူဆောင်ရွက်မှု၏အစီအစဉ်တစ်ခုရှိရမည်။ " ထောင်ထဲမှာသွားပါသောမိန်းမကိုပြောသည်
Coulman said: "ဒါဟာclichéရဲ့, ဒါပေမယ့်သင်အောင်မြင်လျှင်, သငျသညျအားကောင်းစေသည်။ "
Christina Milian: Matt Pokora ၏အဖော်သူမ၏ဟောင်းနစ်ခ် Cannon လိမ်လည်လှည့်ကြောင်းတွေ့ရှနိုင်ခဲ့သည်ဘယ်လို
စာရာသည်ဖာဂူဆန်ပျက်စီး: ဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဇဘက် II ကိုပြင်းထန်သောဖာဂီပြုပြီးနောက်